Ogaden News Agency (ONA) – Qubanaha Wararka Kacdoonka Shacabka Oromiya.
Qubanaha Wararka Kacdoonka Shacabka Oromiya.
Kacdoonka ka socda Gobolka Oromiya iyo deegaamo kale oo kamid ah Itoobiya ayaa bishii 6aad galay. Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaadhaya deegaanka Oromiya waxaa maalmahan aad usii badanaya gabood-fallada kala duwan ee ciidanka Woyaanuhu ay ka wadaan dhulka Oromiya.
Wararku waxay sheegayaan in shacab badan lagu xasuuqay meelo kamid ah Gobolka Oromiya sida Hararge, Galbeedka Shawa iyo deegaamo kale oo kamida ah dhulka Oromiya. Sidoo kale waxaa wali xadhig iyo jidhdil baahsan lagu hayaa ardayda Jaamacadaha iyo iskuulaha hoose, dhexe iyo sare wax kabarta oo si naxariis la,aan ah ay ciidamada Woyaanuhu ula dhaqmaan.
Dhinaca kale waxaa maxkamad ku sheegta Woyaanaha ee Addis Ababa la horkeenay 31 maxbuus oo siyaasad ahaan u xidhan. Maxaabiistan ayaa cuntada ka soomay taasoo ay kaga cabanayaan dulmiga iyo xadhiga xaqdarada ah ee loo gaystay. Warkan ayaa intaas raacinaya in tirada maxaabiista siyaasiyiinta ah ee cuntada kasoomay ay sii badanayaan maalimba maalinta kasii dambaysa.